Homerun: Unity-style KDE | Avy amin'ny Linux
Homerun: Unity-style KDE
Na dia tsy mpankafy ahy aza aho UnityRaha tsapako fa manana zavatra maro tadiaviko izy ary heveriko fa ny interface misy azy dia mety ho an'ny fitaovana misy fàfana mihena toy ny Netbooks.
Betsaka no hahalala an'izany KDE azo namboarina ho amin'ny teboka izay toa mitovy Unity, saingy misy antsipiriany lehibe tsy hita: Pitchers sy Lens. Izany hoe, ilay faritra aseho ary mamela antsika hikaroka rindranasa, fisie ary ny hafa, mampiseho sary masina lehibe.
Eto izy Fihodinana an-trano, Mpandefa efijery feno miaraka amin'ny atiny voalamina anaty kiheba.
Afaka mahita Screencast an'ny iray amin'ireo mpanoratra ao amin'ny YouTube ianao:
Con Fihodinana an-trano Azontsika atao ny mizaha ireo rindranasa napetraka ary manomboka azy ireo na manampy azy ireo amin'ny lisitra ankafizinao mba hidirana azy ireo haingana avy amin'ny pejy fandraisana.
Fihodinana an-trano tanisaina ireo toerana / lahatahiry ankafizinay ary ahafahantsika mivezivezy amin'ireo. Ny fikitihana ny singa iray ao amin'ny fizarana "Toerana Favorite" dia lisitra ny atin'ny lahatahiry ity, mba hahafahantsika mivezivezy amin'ny alàlan'ny lahatahiry hanokatra rakitra nefa tsy mila mampiasa mpitantana rakitra.
Ny Version 0.1.0 dia azo alaina ao amin'ny download.kde.org. Ny Git Repository dia amin'ny projet.kde.org ary misy koa a PPA ho an'ny mpampiasa ny Kubuntu.
More Information: KDE Userbase
Manantena manokana an'izany aho Fihodinana an-trano avia fenoy ny banga nataonao tamiko KDE Netbook, izany hoe ny sesinan'i KDE ho an'ireo fitaovana ireo, izay raha ny fahitako azy, dia fahaiza-manao ratsy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Fisehoana / personalization » Homerun: Unity-style KDE
ahhaha Chevere .. Na dia mieritreritra aza aho fa tsy misy mpampiasa Kde te-hanao an'io.
Fantatro fa toa ny marathon mandriva / rosa io
betsaka, fa tavela any mandriva aho
Tsy mpankafy ny Unity aho, ary kely kokoa ny KDE, fa ny hany zavatra tsy haiko momba an'i Ubuntu dia ity. Ho hitako raha toa ka andramako miaraka amin'ny KDE izany. Raha ny marina dia "Fedorian" kokoa aho. Fampiharana mahafinaritra.
Tsara, antenaiko fa ho avy tsy ho ela ny kinova ho an'ny Xfce, manadala aho.
Rehefa mieritreritra an'izany aho dia mampahatsiahy ahy an'i Homer Simpson betsaka i Homerun.
hehehehe, io lazaiko io ihany, tsy tonga tao amiko izany.
Ka izao ny firaisana dia tsara sy tsara? Tsy milaza izany ho fitsikerana ny mpanoratra ny lahatsoratra aho, nolazaiko izany satria efa nolazaiko hatrany fa rehefa misy tontolo hafa manao izay nataon'i Canonical tamin'ny Unity dia ho tsara tarehy ny Unity na dia tsy mieritreritra aho fa araka ny hevitr'ireo mpampiasa distros sy / na tontolo iainana hafa dia eken'izy ireo tsara ny Firaisankina. Na izany na tsy izany, miombon-kevitra amin'i @Jccmux aho amin'ny filazako fa "tsy mieritreritra izy fa misy mpampiasa KDE te-hanao an'io". Ho an'ny zavatra iray, hanohy ny GNOME ireo mpampiasa GNOME, na Shell na Classic (na dia tiako holazaina bebe kokoa amin'ilay kilasika aza). Ho an'ny zavatra ampiasain'ny mpampiasa ny MATE, kanelina na ny tontolo samihafa dia ny tsirairay amin'ireo tontolo iainana ireo, satria tian'izy ireo kokoa izany, fa tsy hoe antenaina hitovy amin'ny Unity izy ireo amin'ny fotoana iray ... noho izany dia mampiasa Ubuntu izy ireo ary izay ihany. Tsy fantatro…
tsy hoe ny firaisan-kina dia tsara sy tsara. efa zatra firaisan-kina izy ireo.
Ny tena fahamboniana KDE dia raha tianao ny menio toa ny Unity dia tsindry iray monja ilay izy. Raha tianao ny launcher menio karazana win7 na xp, dia tsindry iray monja io, raha tianao ny zavatra mitovy amin'ny gnome2, azo alamina ihany koa araka ny itiavanao azy, raha tianao ny bikan'ny macos dia manana izany ianao.
Ireo singa ao aminy dia tsy mitokana.
Andramo atao izany amin'ny akorandriaka na firaisan-kina.
Mos dia hoy izy:
toy izany koa !!!!!
Tsy fantatro hoe maninona ny olona no mieritreritra fa ireo misafidy kde dia noho ny fisehoany, azo tratrarina miaraka amina lohahevitra, inona no azo atao dia ((fivoarana == mpampiasa)? Tohizo: + = «saika») izay omena anao mandresy!
rodolfo arguello dia hoy izy:
Izaho manokana, ny firaisan-kina tamin'ny voalohany dia tsy tiako ilay izy fa efa nampiasako ary manana ny zavatra tsara ao aminy, vao maika ubuntu tiako ny fijeriny sy ny fahatsapany sary masina ary ny hafa izay tsy dia tiako loatra dia ny fampiasana azy io na ny fahombiazany toa ratsy rehefa mandeha izy fa tena tsara, angamba raha tsy niankina tamin'ny akorany gnome izy ireo dia heveriko fa ho tsara kokoa. Saingy tontolo tsara izy io.
Mamaly an'i rodolfo arguello
Homerun dia efa nanolo ny Plasma Netbook eto. Tsara kokoa.
Efa nanandrana ve ianao?
Tiako izy izany !! Nampiasako azy io nandritra ny fotoana kelikely. Ampiasaiko ho toy ny ambadika io, avelako pikantsary
Oh !! Tsara. Ahoana ny fomba fitondran-tenany? Manao ahoana ny fanjifana sy ny hafa?
Tsy hitako ny fahasamihafana lehibe kokoa noho ireo mpandefa fampiharana hafa amin'ny resaka fanjifana loharano ary tena milamina izy io.
Ary ho an'ny menio fitaovana dia ampiasao menubar (kdeplasma-applets-menubar)
Fanontaniana farany iray, Kubuntu ve izany na Arch? XDD
Fantatro fa mahasosotra aho hahaha, fa misy "manager bundle" misy ny chakra logo miseho xD, tamin'ny fomba Vicky, tiako ilay "tsipika mainty" izay mamakivaky ny bara fitetezana ny dolhpin, ahoana no nanaovanao izany? 🙂
x11tete11x safidy Bespin io. Izy io dia ao amin'ny Workarounds of the Bespin Configure
Etsy ankilany, ahoana no nametrahanao ny menio fitaovana teo amin'ny takelaka?
Elav: raha ny fahitako ny pikantsary dia azo natao tamin'ny fomba 2:
1) miaraka amin'i Xesp Bespin
2) miaraka amin'ny plasma-widget-menubar (Canonical appmenu)
Tadiavo ilay plasmoid antsoina hoe "Window Menubar" (raha ny pikantsarin'i @ vicky no tianao holazaina).
Tonga lafatra, misaotra!
Salama, tsy namaky ilay lahatsoratra aho fa mba te hahita izay miseho ao amin'ny masoivoho xD
Raha ny marina, toa ahy ny dope, dia mitovy amin'ny hetsika "finday sy fanatanterahana" KDE izay ampandehanana amin'ny fanaovana tsindry 2 xD
Tena tsara izany, saingy mila ondrilahy be dia be eo alohany.
Ahoana ny momba an'i Elav.
Na dia manana fikirakirana manokana ho an'ny netbook aza ny KDE, ny marina dia mamela be ny faniriana, tsy amin'ny fampisehoana ihany fa amin'ny sarotra ihany koa ny fampiasana azy (nampiasaiko nandritra ny 3 volana tamin'ny solosaina finday nariako) ankoatr'izay dia be loatra ny hatsiaka. Misy ihany koa ny kinova ho an'ny takelaka, izay tsara lavitra kokoa saingy tsy afaka nametraka azy teo amin'ny birao birao na solosaina finday PC aho nefa tsy nanana olana manokana.
Ity "mpandefa" ity dia raha natao ho an'ny fanatsarana ny efijery ary tena manokana amin'ny netbook ankoatr'izay amin'ny solosaina PC dia toa tsara. Tsy mpankafy firaisankina aho fa ny marina ho an'ny efijery kely, ity "mpandefa" ity dia mametraka fihodinana hafa amin'ity tontolo ity.
Hotsapaiko amin'ny netbook fa efa hanaisotra windows avy eo aho ary apetrako ao ny KDE sy HomeRUN hahafahana mamakafaka azy.
Marina izany. Faly be aho fa hampiasa ny fivoriana Netbook ao amin'ny HP Mini any am-piasana, saingy hey, mandeha tsara kokoa ny fivoriana mahazatra.
Tena mahatonga ahy ho azon'ny fakam-panahy hanandrana ny KDE izy ireo, satria mpampiasa Gnome-Xfce aho, ataon'izy ireo resin'ny fakam-panahy aho. Ary mihoatra noho ny latabatra Alemanina io, efa manome ahy ny hevitra hoe latabatra tena…… «tsara» io.
Goxtobe dia hoy izy:
Saika hanandrana aho Misaotra !!!
Mamaly an'i Goxtobe
Miara-miasa amin'ny Linux ve i Microsoft ???